Eye of Ra' Ny Fanaka Zavakanto An-Tanàn-Dehibe - Famolavolana
Ny Fanaka Zavakanto An-Tanàn-Dehibe
Ny Fanaka Zavakanto An-Tanàn-Dehibe Ny tanjon'ity famolavolana ity dia ny hanambatra ny tantaran'ny Ejiptiana tranainy miaraka amin'ny fomba fanamboarana tsiranoka futuristic. Fandikana ara-bakiteny ny fitaovam-pivavahan'ny Ejiptiana be mpitia indrindra ho toy ny tsiranoka amin'ny fanaka eny an-dalambe izay manelingelina ny toetra mampiavaka ny fomba mikoriana izay tsy misy endrika na endrika voafaritra. Ny maso dia maneho ny an'ny lahy sy vavy amin'ny hafa amin'ny fiterahana Andriamanitra Ra. Ny fanaka an-dalambe noho izany dia aseho amin'ny endrika maresaka mafy maneho ny maha-lahy sy ny tanjany raha toa ny endriny miendrika hazomainty dia maneho ny maha-vehivavy sy ny hatsaram-panahy.
Anaran'ny tetikasa : Eye of Ra', Anaran'ny mpamorona : Dalia Sadany, Anaran'ny mpanjifa : Dezines , Dalia Sadany Creations.
Ny Fanaka Zavakanto An-Tanàn-Dehibe Dalia Sadany Eye of Ra'